सगरमाथामा फोहोरको थुप्रो (तस्विरसहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सगरमाथामा फोहोरको थुप्रो (तस्विरसहित)
एजेन्सी। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको एक प्रमुख गन्तव्य स्थल हो। जहाँ वर्षेनी ५० हजार पर्यटक घुम्न आउने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय पर्यटनले त्यहाँको वातावरणमा पनि असर पार्दै गइरहेको छ।
त्यहाँ आउने पर्यटकहरुले खाएर फालेका फोहोरहरुको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिदैं गएको छ। जसले गर्दा त्यहाँको वातावरणमा नराम्रो असर पर्दै गएको छ।
अहिले सगरमाथा जाने आसपासका क्षेत्रमा फोहोरको अवस्था कस्तो छ ? हालसालै भूवैज्ञानिक 'एल्टन बाइयर्स' ले सगरमाथा जाने बाटो आसपासका क्षेत्रको फोटोहरु खिचेका छन्। जहाँ फोहोरको अवस्थालाई प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ।
यस विषयमा डेलिमेलमा पनि समाचार प्रकाशन गरिएको छ। डेलीमेलमा प्रकाशित समाचारमा उनले भनेका छन्– सगरमाथा हिमाल वर्षेनी आयोजना गरिने सरसफाई अभियानले गर्दा सोचेको भन्दा सफा छ। तर अन्य स्थानमा भने धेरै मात्रामा फोहोरहरु थुप्रिएका छन्। यद्यपी पर्यटकहरुले फालेका धेरैजसो फोहोरहरु कतिपय जलाइन्छ त कतिपय गाडिने गरेको उनले बताए।
साथै उनले त्यहाँका स्थानीयहरुलाई पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न समथर भूभागको कमि हुँदै गएको बताएका छन्। वर्षेनी हुने सरसफाई अभियान पनि बेस क्याम्प केन्द्रित हुने भएकोले यसलाई बेसक्याम्प बाहेक अन्य स्थलमा पनि केन्द्रित गर्दै यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बताएका छन्।